पहिरोमुनीको भविष्य – Sajha Bisaunee
‘हलो तँ ठीक छस् नि ? यसपालीको बर्खा उखापात भयो । हुन त कुन चाहिँ बर्खा पो नेपालका लागि शान्त बनेको होला र ? मलाई पहाडको औधि चिन्ता लागेर आउँछ । दिदीको हाल खबर के छ ?’ मलाई रातभरी निद्रा नै लागेन हेर न ?’
रहिनाको चिन्तित आवाज आइतेको फोनमा मसिनो गरी आइपुग्यो ।
‘कालिकोटको दुःखद् समाचार पढिस् कि क्या हो ? सेन्टी दिइराछेस् त ! अब तराईको हालत पनि उही त हो नि, डुबानमा परेर । कुन दिन सीमानाका बाँध फेरि फुट्छन् र बिचल्ली हुने हो । डर सबैतिर एकैनासको छ यार ।’
‘I’m serious । मलाई अहिले तिमीहरूको चिन्ता लागिरहेछ । समाचार कालिकोटको मात्रै कहाँ हो र देशैभरीको आइरहेको छ । पहाड जोखिममा छ । पहाडका मान्छेहरू अकालमै मृत्युवरण गरिरहेका छन् । तराईको हालत पनि उही हो थाहा छ । तर अहिले पहाडी इलाकामै क्षति बढी भइरहेको छ ।
कलेजको सिनियर ब्याजको बिदाइ कार्यक्रममा तैले एउटा गीत गाएको थिइस नि ! के रे त्यो गीत ? कस्तो नआएको । त्यो ‘नआयै बाढीअ’ भन्नेवाला के थियो नि ।’
‘एए त्यो गीत …?’
‘अँ–अँ त्यही भन त एक छिन ।’
‘हिउँदमास चिसो हुन्छ, एकसारो राडीअ ।
घर मेरो पहाडको छेउमा, नआयै बाडीअ ।।’
‘Yes ! यही गीत त हो नि । हेर त डर बोकेको यो गीतले । नभन्दै बर्खामा तनाव सुरु भइसक्यो । यसो गरौं न आइते । तँ जुम स्टार्स गर्दै गर । लिङ्क हामीलाई पठाउने बेलासम्म म सबैलाई फोन गरेर आउन भन्छु । सबैको बोली सुन्न नपाएको पनि दुई हप्तै भइसक्यो । अस्ति तेरो सपनाले समय खायो ।’
रहिनाले फोन लगाउँछे उताबाट एउटी केटी रिप्लाई दिरहिछ, ‘हाल लकडाउन खुले पनि कोरोनाका जोखिम….।’
यै बेला रहिना सोच्छे ‘अब यो कोरोनाको बढी भइसक्यो । बरु पहाडमा जोखिम छ । तराई डुबानमा पर्न सक्छ वा अरु यस्तै खालका रिप्लाई गरे पनि हुन्थ्यो नि ।’
उसले एक सासमा सबैलाई फोन गर्न भ्याई ।
‘हाई आइते ।’ बक्राम, महाशंकर, झुमाको रिमिक्स टोन सुनिन्छ ।
‘हेलो गाइज ! के छ नि तिमीहरू सबैको खबर ?’
‘म र आइते त के को हाइ हलो गर्नु र है ।’
‘किन भेटिस क्या हो आइतेलाई ।’
‘होइन भर्खर फोन गरेकी थिइ, जुम मिटिङ गरौं भनेर ।’
‘मलाई तिमीहरू तीन जनाको चिन्ता लाग्यो । पहाडमा पहिरो आएको आयै छ । तिमीहरू सबै उतै छौं । फेसबुकमा विभत्स तस्विरहरू देखिन थालेका छन् । त्यसमा तिमीहरू कोही पर्‍यौ कि भनेर आङ सिरिङ्ग हुन्छ । अब त फेसबुक चलाउन पनि डर लाग्न थालिसक्यो । कतिसम्म हेर्न सकिन्छ र यस्ता तस्बिर ?’
‘ओ ओ ! कुरा यस्तो ? तँलाई हाम्रो चिन्ता पनि लाग्ने रहेछ है । भनेपछि माया गरिरहेकी छेस् ?’
‘चुप लाग टुप्पी । यहाँ देश रोइराछ तँ मजाक गरिराछस् है । हुनत यी बाहुनहरू कहिले पो सिरियस भए र ? मान्छे मरेको बेला पनि देलान र खाउँला भनेर कुरी बसेका हुन्छन् । सत्ताको सबैतिर यिनीहरूकै हाडखोड छन् ।
गाउँमा जुनसुकै जातमा मान्छे भए पनि उनीहरूको मगजमा यिनीहरूको कानेगुजी भरिएर बसेको छ । विकासको नाममा माटो मासेका छन्, आमाको छाती चिरेसरी । अनि हरेक वर्ष बर्खा लागेसँगै बाढी आउँछ मान्छे मर्छन् । तँ काट्ठो काट्टो खालास् । किन सिरियस हुनुप¥यो र है ?’
‘महाशंकरलाई तँ जहिले टोक्छेस् यार । यसको स्वभावै यस्तै त हो नि । तँ सँग ठट्टा नगरी यसलाई खाएकै पच्दैन ।’ बक्राम ।
‘म यसलाई कति पटक भनुँ ? मलाई बाहुन भनेर नपेल भनेर । द्वन्द्वकालमा माओवादीले शरीरमा मुसो दले भन्दा बढी पीडा हुने गरी शब्दले पेल्छे । कहिलेकाहीँ त लाग्छ यो सँगको सङ्गतै छोडिदिउँ ।
मेरो पछाडिजात झुण्डिएको मात्र त हो नि बाँकी मसँग बाहुन हुँ भन्नलाई के नै छ र ? मैले जनै त्यागिदिएको छुँ । अब मसँग अवशेष के नै छ र ? सत्तासँग मेरो साइनो नै के छ र ? जति यसको आवेग सत्तासँग छ उति मेरो पनि छ । दिदी सम्झाउनु न यसलाई । कुन दिन यसले मेरो रगत चुसेर सकाउँछे ।’
अघिसम्म मौन ब्रत बसेकी झुमा बोली, ‘गर गर तिमीहरूको झगडा भएन भने पनि कोरोना र बाढी पहिरोको कुरा सुन्दा सुन्दा पाकेको कान सञ्चो हुँदैन । रहिनाको चिन्ता जायज छ । महाशंकरले यति गरेन भने मज्जा पनि आएन नि । कस्सो आइते ?’
‘हो नि दिदी ।’
‘दिदी हुनुहुन्छ र यी ३६ हरूलाई ६३ बनाइदिनुहुन्छ ।’ बक्राम बोल्छ ।
‘बाजे गल्ती आफै गरिबक्सन्छ अनि आफ्नो हात माथि पार्न खोजिसिन्छ ।’
‘सरी यार । अब तँसँग ठट्ठा गर्दिन ।’
‘हाय ! हाय !! बाजे भयो भयो, एक दिन मात्र बित्न दिउँ हजुरको इगो कति टिक्दो रहेछ हेरौंला ।’
‘ल ल भयो–भयो तिमीहरूका कुरा सकाउ । बरु यसो गरौंन, आज हामी यही विषयमा छलफल गरौं न ।’
‘हुन्छ’ सबैजनाको एक स्वर ।
‘ल आज महाशंकर नै भन न । तिमी यतिबेला फेसबुकमा कालिकोटबारे लेखिरहेका छौं । त्यहाँको केही अपडेट गराउ । त्यो एउटा नानीको डायरीको कुरा पनि लेखिरहेका थियौ । के हो सबै भन् न । बाँकी अरु साथीहरूले पनि छलफलमा भाग लिउ है, आज ।’
झुमाले यति भनेपछि सबै चुप लागे । आइते थोरै बोल्न थाल्छ ।
‘पहिरोले सबैभन्दा बढी क्षति गरेको ठाउँ नरहरिनाथ गाउँपालिकाको बागा हो । जहाँ एकै परिवारका सात जानको ज्यान गयो । वडा नं. ४ मा पनि क्षति भएको छ त्यहाँ एकै घरको दुई जनाको ज्यान गयो । धेरै कुरा मलाई पनि थाहा छैन । त्यहाँको एकजना साथीसँग कुरा भएको थियो । उसले मलाई सात जनाको परिवारकी नातिनी चन्द्रिका बुढाको डायरी बारे भनेको थियो ।
उनी १० वर्षकी भइन ४ कक्षामा पढिरहेकी । साथीले उनले कापीमा लेखेको भविष्यको योजनाबारे सुनाएको थियो ।’
‘के थियो डायरीमा ? तैंले थाहा पाइँस ? छ भने भन न प्लिज ।’ रहिना हतारिन्छ ।
‘कति हतार गरेको म भन्दैछु छ त ।’
‘घर पुरै बगाएकोले त्यहाँ बचेको केही थिएन । लास सबै हिलोमा डुबेका थिए । सामान सबै हिलाम्मे । त्यही बीच एउटा झोला भेटियो । आधा आधी भिजेको झोलामा नबुझिने अक्षरमा थियो रे, चन्द्रिकाको डायरी । साथीले भने अनुसार त्यसमा केही कविता थिए । केही उनका टिपोटहरू थिए ।’
‘भनेपछि चन्द्रिका साहित्यमा रुचि राख्ने थिइन् ।’ बक्राम ।
‘पढ्न दे न डायरीमा के छ ?’ ठूला आँखा बनाउँदै बक्रामलाई हप्काउँछे ।
‘अँ ! धेरै कुरा नबुझिने भए पनि उनको भविष्यको योजना लेखिएको पाना सफा थियो । त्यसमा यस्तो लेखिएको थियो ।
आज म सानी छु । सानो मान्छेलाई सबैले माया गर्छन् । तर पाइला पाइलामा काम बिगार्ने हुनाले हामीले कहिले गालीत कतिबेला चुटाइ पनि खान्छौं ।
मिसले भन्नुभएको बालबालिकाले धेरै पिटाइ खान थाले भने उनलको दिमागमा असर पर्छ र मनमा डर पनि पस्छ । जसले उनीहरूको सिकाइमा नराम्रो असर पर्छ । बेलाबेलामा काँप्ने, सपनामा पनि बर्बराउने हुन्छ रे । त्यसैले बालबालिकालाई सिक्ने वातावरण घरदेखि स्कुलसम्म सबै ठाउँमा उस्तै हुनुपर्छ ।
मेरो कक्षाका सबै साथीहरूको इच्छा पाइलट, डाक्टर, इन्जिनियर बन्ने छ । तर हामी सबै साथीहरू गरिब परिवारका छौं । हामीलाई गणित पढाउने सरले भन्नुभएको डाक्टर, इन्जिनियर पढ्न धेरै पैसा लाग्छ रे । तर हामी कसैको घरमा पनि त्यतिका पैसा छैन ।
यो सुनेपछि मलाई, लाग्यो हाम्रा साथीहरूको दिमागमा असर पोर्न चक्र सुरु भइसकोको छ । पैसा नहुने हामी गरिबका छोराछोरी सुरुदेखि नै बिग्रन लागेका छौं । हाम्रो भविष्य सुरुदेखि नै बिग्रने रहेछ ।
यी कुरा थाहा पाएदेखि मलाई लाग्न थालेको छ । म ठूली भए भने धेरै पढेर गरिबहरूको विषयमा लेख्नेछु । बच्चैदेखि हाम्रो मानसिकता बिग्रन नदिने गरी लेख्नेछु ।
हाम्रो नेपाली सरले भन्नु भएको राम्रो लेख्यो भने समाज बदल्न सकिन्छ रे । म समाज बदल्ने गरी लेख्नेछु । रुचि हुने र पढ्न जान्नेले पैसा नहुँदा पनि पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा लेख्छु ।
म लेखक बन्नलाई हर कोसिस गर्नेछु ।
मलाई साथीले यसको फोटो पठाएको थियो ।’
‘चन्द्रिकाको सफा काजगमा लेखिएको उज्यालो भविष्य पहिरोले पुरेछ । यसरी हरेक वर्ष भविष्य पुरिने र बग्ने, डुब्ने भइरहेको छ ।’ झुमाले लामो सास तान्छे ।
‘मलाई बहुत बेचैनी भइरहेको छ । म केही बोल्न सक्दिनँ ।’ रहिना ।
‘मलाई त लाग्छ भविष्य बगाउने काम सरकारले गरिहेको छ ।’ बक्रामको राय ।
‘कसरी ?’ महाशंकरको प्रश्न ।
‘आज गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा लागेको छ । ती दरबारमा सिंहजस्ता शासकहरू बसेका छन् । उनीहरूको विकासको मूल एजेण्डा भनेकै सडक खन्ने हो । जंगल–गंजलसम्म जोडर हालेर कमिशन खानु हो । एक त खन्ने बित्तिकै त्यसमा पानी पर्दा माटो बगेर जाने सम्भावना रहन्छ भने डोजर जस्तो जमिनलाई बढी भाइब्रेट गराउने साधन प्रयोग गरेपछि बाढी पहिरो आउँछ नै । अहिले सबैभन्दा बढी बाढी पहिरो जोखिम नयाँ सडक खनिएको ठाउँमा छ ।
योगी नरहरिनाथको गाउँमा पुस्तकालय खोल्नुपर्नेमा सडक खनेपछि एक चन्द्रिका मात्रै होइन लाखौं चन्द्रिकाहरूको भविष्य पूरिने नै भयो । आज चन्द्रिकाहरूको भविष्य पुरिनु भोलिका योगी नरहरिनाथहरू पुरिनु हो । कर्णालीले पर्याप्त मात्रामा प्रतिभा जन्माउन नसक्नुको कारण यो पनि एक हुनेछ ।’
‘तिमीले क्या घतलाग्दो कुरा ग¥यौ बक्राम । हाम्रो विकासका खतरा यही नै हो ।’ आइते बोल्छ ।
‘हो नि यो विषयमा त मैले सोचेकै रहेनछु ।’ महाशंकर ।
‘मलाई प्यारी चन्द्रिकाको खुब याद आइरहेको छ दिदी । मैले तपाईंहरूको मात्र चिन्ता गरेकी थिए । तर भविष्य नै गायव भएको रहेछ । जबसम्म विकासको नाममा स्थानीय सिंहहरूको बोलवाला चलिरहन्छ तबसम्म यस्तो भइरहन्छ ।’ रहिनाको आवेग पोखिन्छ ।
‘आज सबैले सक्रियता देखायौं । बक्रामको कुराले मलाई छोयो । योगी नरहरिनाथको गाउँले दुनियाँलाई के सिकाउनु पथ्र्यो त्यही कुरा भुलेपछि यस्ता घटनाहरू दोहोरिरहन्छन् । त्यहाँको पहिरोको कारण भलै डोजर हालेर रोड खन्नु नहोला तर जोखिम त हिजोदेखि नै थियो । यही विषयमा सोच्न नसक्नु नै ठूलो भूल भयो ।’
‘दिदी समय सकियो । के गरौ ?’ होष्टको आवाज ।
‘अब बिदा हुने नि ब्रो !’ बाँकी सबैको बोली ।
नोट ः चन्द्रिकाको डायरी काल्पनिक हो ।
प्रकाशित मितिः १७ श्रावण २०७७, शनिबार ०६:०५